Umklamo Ovelele we-Ceramic Ultrasonic Aroma Fan Diffuser - Idizayini Egqamile Nokwakha Co., Ltd.
Jabulela isipiliyoni sokugcina se-aromatherapy ngeGreen Ball Ultrasonic Aroma Diffuser. Inikwe amandla yintambo yamandla (ifakiwe), lo mklamo omuhle we-diffuser chic uyenza ilungele noma iliphi igumbi. Le ultrasonic aromatherapy diffuser izokuvumela ukuthi usakaze owoyela bakho obathandayo edeskini lakho, eceleni kombhede wakho noma enye indawo encane. Izici Amasethingi ezinkungu ezingeni ezimbili Agijima amahora angu-4-6 (Isikhathi sokuqalisa siyahlukahluka kuye ngokuthi kusetshenziswe inkungu esetshenzisiwe) Hlanganisa futhi uvuselele ikhwalithi yomoya nge-c ...
Jabulela isipiliyoni sokugcina se-aromatherapy ngeGreen Ball Ultrasonic Aroma Diffuser. Inikwe amandla yintambo yamandla (ifakiwe), lo mklamo omuhle we-diffuser chic uyenza ilungele noma iliphi igumbi. Le ultrasonic aromatherapy diffuser izokuvumela ukuthi usakaze owoyela bakho obathandayo edeskini lakho, eceleni kombhede wakho noma enye indawo encane.
umhlanga diffuser nezinti zemvelo zokusetha isipho